Maxay Tahay Sababta Raadinta Mobile-kayga Samsung Ay Uga Fiican Tahay Google | Androidsis
Galaxy Note 10 + waxaan kuusoo bandhigeynaa fiidiyowgaan why Find my Samsung mobile ayaa ugu fiican xalka aad gacantaada ku heyso daqiiqadahaas muhiimka ah ee aan ku heli karin mobilka.
Sidaa darteed iyagu waa 6 sababo awood badan taas oo aan hadda tilmaameyno, marka laga reebo inaan ku tusno is dhexgalka iyo sida loo kiciyo. Kahor intaadan aadin daabacaada inteeda kale, xaqiiqda ah in xalka Samsung uu ka hortagayo tuugga yar inuu damiyo taleefanka, kaligiis ayaa ku filan in loo wakiisho kahor Google.
1 6 sababood oo loo adeegsado Samsung's Find my mobile
2 Firfircoonow Raadi Mobile-kayga
6 sababood oo loo adeegsado Samsung's Find my mobile
Noocyada noocan ah xalalka ayaa jira, laakiin illaa aad isku aragto baahida loo qabo inaad adeegsato ma ogaanaysid qiimahooda weyn. Google way fiican tahay, laakiin hadaan isbarbar dhigno Samsung, midab majiro
Kuwani waa 6-da sababood ee ugu sareeya:
Waad ka hortagi kartaa tuugga yar ama qofka taleefanka damiya. Taas oo wax walba burburin doonta, maadaama aynaan dhul u dejin karin. Ma awoodo inuu dami mobilada micnaheedu wuxuu yahay in isticmaaluhu ku haysto gacan yaraha gacantiisa meelkasta oo uu tago. Kaliya waa arrin loo maro booliiska si loo siiyo macluumaadkaas qiimaha leh.
Waxay noqon kartaa diiwaangeli goobtaada oo ilaali taariikhda goobta. Waxaan ku haynaa khariidad dhan Raadinta mobilka moobilka app-ka oo si sax ah u tilmaamaya meesha saxda ah ee mobilkayagu ku yaal. Dhab ahaan GPS waa la hawlgaliyay, taas oo xalka Google uusan sameynin.
Waad sameyn kartaa kayd ama kayd laga bilaabo telefoonka fog ilaa Samsung Cloud oo aan haysanno 15GB bilaash ah oo aan u haysanno. Sidaas ayaanan u waayi doonin wax xog ah ka hor inta mawduuca mobiilku ka dhacay uu helo waddo uu ku masaxo ama ku damiyo.
Waxaad awoodi kartaa soo hel dhammaan wicitaannada iyo farriimaha: hawl kale oo aad u faa'iido badan si loo ilaaliyo waxyaabaha ugu muhiimsan gacanta, sida wicitaanadii ugu dambeeyay ee la sameeyay.
Waad dhaqaajin kartaa habka batteriga casriga ah oo markaa la kordhiyo saacadaha uu moobiilku ku daaran karo. Aynu xusuusano in qaabkan moobiilku maalmaha ugu dhammaysan karo. Dariiq weyn oo loogu talagalay helitaankaas gacantaada ku jira inuu ku firfircoonaado saacado badan oo badan.
La Soo hel interface-ka mobilka ee mobilka way ka fududdahay uguna sasabasho badan tahay.
Astaamo taxane ah oo ka tagaya aad u cad nidaamka si loo doorto. Kaliya markaan tirino inaan ku qasbi karno inaysan damin oo GPS-ku uu ku xirmi karo meesha uu ku yaal, waa ku filan tahay waxaanna ka hadlaynaa laba hawlood oo aan ku jirin Google.
Firfircoonow Raadi Mobile-kayga
Si aan u hawlgalino shaqadan waxaan u sameeynaa sidan:
Aan aadno Dejinta> Biometrics iyo Security> waxaan dhaqaajiney Raadi mobeelkeyga
Hadda waxaan dhaqaajin karnaa furaha fog si markaa shabakadda xitaa aan uga heli karno moobaylka haddii sabab kasta ha noqotee aan illownay PIN ama lambarka sirta ah.
Websaydhka la aado si loo isticmaalo dhammaan astaamaha waa: https://findmymobile.samsung.com
Ka socda shabakaddaas waxaan marin u helnaa dhammaan xulashooyinkaas:
Raad raac goobta
Dib u hel wicitaanada / fariimaha
ka Masuuladu waa dad aan fasax ka siino Waxay na siin karaan gacan marka ay tahay inaan isticmaalno Raadi mobilka oo aanan haysan internet, oo way awoodaan.
6 sababood oo ah Raadi Samsung mobile-kayga ayaa aad uga fiican marka loo eego adeegga Google u gaarka ah. Haddii aadan adeegga si qoto dheer u aqoon oo aad leedahay mobiil Samsung ah, ha ka fikirin. Iyo haddii aad u isticmaasho S Pen ee Galaxy Note, ha moogaanin khiyaamadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » 6 sababood oo ah sababta Raadi My Samsung Mobile ay aad uga fiican tahay Raadinta Google Mobile-kaaga
OneDrive waxay soo bandhigeysaa qaab mugdi ah beta-kii ugu dambeeyay